दबङ्ग शैलीमा होइन, जनताको मन जितेर सुरक्षा दिन्छन डिएसपी मिश्र - Dainikee News::
रामहरि कार्की /जीवन अधिकारी
ललितपुर, जेठ ५ । सातदोबाटोमा रहेको महानगरीय प्रहरी वृत्तमा एकजना गर्भवती महिला आइन र सरासर प्रहरी प्रमुखको कोठामा पुगिन । त्यसपछि उक्त ईलाकाको प्रहरी प्रमुखले भित्र बोलाए । ती महिला सरासर प्रहरी प्रमुखको कुर्सी छेउमै पुगिन र लामो सास तानिन ।
प्रहरी प्रमुखले सोधे कति महिना भयो ? ती महिलाले जवाफ दिइन ७ महिना भयो । के खानुभयो त ? बच्चाको स्वास्थ्य कस्तो छ रे ? प्रहरी प्रमुखले एकै पटक थुप्रै प्रश्न गरे । फेरि महिलाले जवाफ दिइन राम्रो छ भन्छ डाक्टर ! घरबेटिले दुःख दिएको छ ? त्यहाँ बस्न अप्ठ्यारो भए म एउटा सस्थालाई भनिदिन्छु, जानु तपाईको केयर हुन्छ ! फेरि ती प्रमुखले प्रश्न र सुझावसँगै दिए ।
तर ती महिलाले मानिनन र भाडाकै घरमा बस्ने अडान लिइन । त्यसपछि प्रहरी प्रमुखले सुझाव दिदै भने– ‘स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु, चिन्ता नगर्नु, केही परे हामीलाई खबर गर्नुहोस् ।’
त्यो दिनभर ती प्रहरी प्रमुखलाई भेट्न विभिन्न थरीका मान्छे आइरहे । कति अपराधी छुटाउन भन्दै आए, केही आफुले कुनै गल्ती नगरे पनि सजाय तोकिएको भन्दै मिलाइदिन आए । म बसुन्जेल उनको वाकिटकी सेटमा थुप्रै सुचना आइरहे । केही दुर्घटना गराएर गाडी भागेको थियो, केही गाउँ गाउँमा डकैती गर्ने डाका समाएको थियो त, केही गम्भीर सुचना पनि आउथ्यो । जब गम्भीर सुचना आउथ्यो उनले त्यो सेटको भोलुम सानो बनाउथे र कानमा लगेर सुन्दै के के निर्देशन दिन्थे । त्यसो त उनको काम नीतिगत निर्णय गराउनु, कार्यालयलाई ब्यबस्थित बनाउनु भएपनि उनी त्यतिमात्रै गर्दैनन, सबैसँग प्रत्यक्ष भेट्छन र सकभर समस्याको समाधान गर्छन । उनी हुन प्रहरी नायव उपरिक्षक (डिएसपी) गौतम मिश्र ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त, सातदोबाटोको कमाण्ड उनले समालेपछि थुप्रै अपराधिक घटनाको किनारा लगाएका छन । इन्सपेक्टर हुँदादेखि कुनै पनि अपराधको जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न सक्षम उनी ललितपुरको सातदोबाटो प्रहरी प्रमुख भएपछि जिल्लामा केही अपराधको अन्तिम किनारा लगाएका छन । एकवर्ष अघि ललितपुरको गोदामचौरमा एक युवतीको सामुहिक बलात्कार गर्ने मुख्य फरार अभियुक्त पक्राउ उनैले गरेका थिए ।
त्यतीमात्र होइन सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट स्टोरको चोरी गर्नेलाई उनैको नेतृत्व टोलीले पक्राउ गर्न सफल भएको थियो । गाडीमा हुने पाकेटमारा नियन्त्रण गराउन उनले विभिन्न सुत्र प्रयोग गरे । जसमा ३७ जनाभन्दा बढि पाकेटमारालाई पक्राउ गरेर अहिले हिरासतमा राखिएको छ । दाबीका साथ उनले भने– ‘अहिले पाकेटमारा नियन्त्रण भएको छ ।’
महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोको एरियाभित्र बडिखेल, गोदावरी, बिसङ्खुनारायण, गोदामचौर, धापाखेल, हरिसिध्द्वी, सातदोबाटो, नखिपोट, लुभु, लाकुरीभन्ज्याङ, इमाडोल, महानगरका १३, १४ र १५ वडा लगायतका स्थान पर्छन । उनले सबै स्थानमा सुरक्षा अवस्था मजबुत बनाएको दाबी गरे ।
उनी दबङ्ग शैली अपनाउदैनन फगत जनतासँग पुग्छन र त्यहीबाट घटनाको भित्री रहस्य पत्ता लगाउछन ।
ललितपुरको यातायात कार्यालयमा भएको बेथिति, गुण्डागर्दी र बिचौलिया समाइ सेवाग्राहीलाई सहज बनाएको उनले बताए । त्यसका लागि उनले तीन महिने अभियान चलाएका थिए, उनको उक्त अभियानलाई कसैले सुइकै पाएन तर बिचौलियाको भने अन्त्य गराइएको उनको भनाइ छ ।
अब फेरि उनलाई भेटन आउने गर्भवती महिलाको कुरा गरौं, ती महिलाका श्रीमान थुप्रै केजी गाजासहित पक्राउ परेका रहेछन । श्रीमान पक्राउ परेपछि ती महिला खाना खान समेत नपाउने अवस्थामा पुगेको भन्दै श्रीमान छुटाइदिन उनले विन्ती गरेकी रहेछन । त्यसको जवाफमा प्रहरी प्रमुख मिश्रले भने– ‘तपाईको श्रीमानले गल्ती गरेको छ, तपाईको स्वास्थ्य देख्दा माया लागे पनि गल्ती गर्नेले सजाए पाएन भने तपाईलाई पनि भोलि समस्यामा पार्न सक्छ, त्यसकारण उसलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ । अब म अदालत पेश गर्छु अनि जे गर्छ अदालतले गर्छ, तपाई फेरि आउनु पर्दैन !’ त्यसपछि ती महिला हस भन्दै त्यहाबाट आफ्नो बाटो लागिन । कानुन पालना गर्न उनले कसैको कुरा सुन्दैनन भन्ने कुरा यहि घटनाले पुष्टि गर्यो ।
अहिले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड खुमलटार बस्ने भएपछि उनको दैनिकी त्यहाँको ब्यबस्थापनमै बितेको उनले बताए । सुरक्षित ललितपुर बनाउन आफू तल्लिन भएर लागेको उनले बताए ।
प्रकाशित मिति: आइतवार, जेष्ठ ५, २०७६ /Sunday, May 19th, 2019, 12:44 pm